शरीरको भिटामिन डी नापौं, नपुगे घाम तापौं « Ghamchhaya
प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०७६, बुधबार १४:५८
जाडो यामको प्रीय काम, घाम ताप्नु । यो तातोका लागि मात्र होइन प्रायले यादै नगर्ने स्वास्थ्य समस्या भिटामिन डिको कमी हटाउन पनि हो
हामीले खाने खाना कत्तिको सन्तुलित भोजनमा पर्ला ? यसलाई ध्यान मात्र दिने हो भने हामीले शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुनै नै कुनै भिटामिन छुटाई राखेको पत्ता लाग्न सक्छ । मानिसको शरीरका धेरै अंगलाई आवश्यक हुने भिटामिन डि त्यस्तै एउटा हो । जो नहुँदा विभिन्न समस्या देखिन्छन् । मानिसहरू त्यसको समाधानका लागि अस्पताल तिर दौडिन्छन् तर जसको औषधि उनीहरुकै घरमा हुन सक्छ। तर त्यसभन्दा अघि आफूलाई भिटामिन डी पुगे नपुगेको थाहा पाउनु पर्छ । यस्ता अवस्थाका मानिसलाई भिटामिन डिन नपुग्न सक्छ । ख्याल गरौं ।
कालो छाला हुनेहरु
तुलनात्मक रूपमा गोरो भन्दा कालो छाला हुनेहरुलाई बढी मात्रामा भिटामिन डि चाहिन्छ । अमेरिकी डाक्टर होलिकका अनुसार त्यसैका कारण अफ्रिकी मूलका अमेरिकीलाई भिटामिन डिको कमी देखिने गरेको छ । छालाको रंगले प्राकृति सनग्लासको जस्तै गरी काम गर्छन् । यदि छाला गाडा रंगको छ भने त्यसले सौर्य किरणबाट पर्याप्त भिटामिन लिन गोरो छालाले भन्दा बढी घाममा देखिनु पर्छ ।
अकारण दुखी महशुस हुँदा
हाम्रो मतिस्ष्कमा सेरोटोनिन भनिने हार्मोन हुन्छ, जो चम्किलो घामसँगै बढने र घामको तेज कम हुँदै जाँदा घटने हुन्छ । वैज्ञानिकहरुले सन् २००६ मा गरेको खोजबाट मानसिक स्वास्थ्यमा भिटामिन डिको प्रभाव पत्ता लगाएका थिए । जसअनुसार ८० प्रतिशत सूर्य किरणबाट प्राप्त हुने भिटामिन डि नपाउने बिरामीहरुमा डिप्रेसनको खतरा राम्रै गरी भिटामिन डि पाउनेमा भन्दा ११ गुणा बढी पाइएको छ
उमेर ५० वर्षमाथि
आफ्नो उमेर बढदै जाँदा छाला पनि बुढो हुँदै जान्छ । त्यतिबेला छालाले घामबाट भिटामिन लिनसक्ने मात्रा पनि घटदै जान्छ । त्यति नै बेला मृगौलाको प्राप्त भिटामिन डि लाई शरीरले काम लिनसक्ने तत्वमा परिणत गर्ने क्षमता पनि कम हुन्छ । साथै बुढो मानिस युवाले भन्दा कम समय घर बाहिर विताउने हुँदा पनि भिटामिन डि पुग्दैन ।
भिटामिन डि बोसोसँग घुल्ने तत्व हो । त्यसैले बोसोले पनि छालाले जस्तै भिटामिन डि सोस्छ । यसको अर्थ मोटो मानिसको बोसोमै भिटामिन डि सोसिने भएपछि अरु अंगलाई आवश्यक भिटामिन डि पाउन थप मात्रा चाहिन्छ। बोसो मात्र होइन मासुनै धेरै मात्रामा भएका व्यक्तिालाई पनि दुब्लो मानिसको तुलनामा बढी भिटामिन डि चाहिन्छ ।
भिटामिन डिका स्रोतहरु
गोब्रे र सिताके च्याउ
माछाको तेल आदि
हाडको दुखाई :
थकानसहित हाड दुख्ने समस्यालाई धेरै जसो थकाई लाग्ने दीर्घ रोग वा फाइब्रोभिएल्जीया भनिने रोग लागेको भन्दै गलत निदान गर्ने गरिएको डा. होलिक बताउँछन्। तर त्यस्ता समस्या ओस्टियोमालालिया भनिने भिटामिन डिको कमीसम्बन्धी रोग हुन्छन् । जसमा हाम्रो अस्थि पन्जरमा रहने कोलाजेम म्याट्रिक्स भित्र क्याल्सियम पुग्नै समस्या भइरहेको हुन्छ ।
टाउको बाट पसिना
भिटामिन डिको कमी थाहा पाउने एउटा मुख्य र पहिलो लक्षण टाउकोबाट पसिना आउनु पनि हो। त्यसैले चिकित्सकहरुले सुत्केरी आमाहरुलाई बच्चाको टाउकोबाट कत्तिको पसिना आउँछ भनेर सोध्ने गर्छन् । टाउकोबाट सामान्य भन्दा बढी पसिना आउनुलाई विटामिन डिको कमिको पहिलो र धेरैजसोमा पाइने लक्षण मानिन्छ ।
चिल्लो पच्दैन भने
भिटामिन डि चिल्लो पदार्थमा घुलनशील भएकै कारणबाट पाचनसम्बन्धी समस्याभएका हरुले चिल्लो खानेकुरामा हुने भिटामिन डि पाउँदैनन् । विभिन्न कारणले आन्द्राको पाचन क्षमतामा कम आएकाहरुमा पनि भिटामिन डि पाउँदैनन् ।
यी अवस्थाहरुमा भिटामिन डि हामीलाई नपुग्न सक्छ । पर्याप्त भिटामिन डि पाउँदा त्यसले क्यान्सर, मुटुरोग जस्ता थुपै रोगबाट बच्न मद्दत गर्छ।